16BitCoin စျေး - အွန်လိုင်း BIT16 ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို 16BitCoin (BIT16)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ 16BitCoin (BIT16) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ 16BitCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ 16BitCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
16BitCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
16BitCoinBIT16 သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0060716BitCoinBIT16 သို့ ယူရိုEUR€0.0051716BitCoinBIT16 သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0046416BitCoinBIT16 သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0055616BitCoinBIT16 သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.054616BitCoinBIT16 သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.038516BitCoinBIT16 သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.13516BitCoinBIT16 သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.022716BitCoinBIT16 သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0080916BitCoinBIT16 သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0084616BitCoinBIT16 သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.13616BitCoinBIT16 သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.047116BitCoinBIT16 သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.033316BitCoinBIT16 သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.45416BitCoinBIT16 သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.0316BitCoinBIT16 သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0083316BitCoinBIT16 သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0091716BitCoinBIT16 သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.18916BitCoinBIT16 သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.042216BitCoinBIT16 သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.64416BitCoinBIT16 သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩7.1916BitCoinBIT16 သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.3516BitCoinBIT16 သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.44616BitCoinBIT16 သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.168
16BitCoinBIT16 သို့ BitcoinBTC0.0000005 16BitCoinBIT16 သို့ EthereumETH0.00002 16BitCoinBIT16 သို့ LitecoinLTC0.000104 16BitCoinBIT16 သို့ DigitalCashDASH0.00006 16BitCoinBIT16 သို့ MoneroXMR0.00006 16BitCoinBIT16 သို့ NxtNXT0.453 16BitCoinBIT16 သို့ Ethereum ClassicETC0.000862 16BitCoinBIT16 သို့ DogecoinDOGE1.72 16BitCoinBIT16 သို့ ZCashZEC0.00007 16BitCoinBIT16 သို့ BitsharesBTS0.223 16BitCoinBIT16 သို့ DigiByteDGB0.195 16BitCoinBIT16 သို့ RippleXRP0.02 16BitCoinBIT16 သို့ BitcoinDarkBTCD0.000204 16BitCoinBIT16 သို့ PeerCoinPPC0.0195 16BitCoinBIT16 သို့ CraigsCoinCRAIG2.7 16BitCoinBIT16 သို့ BitstakeXBS0.252 16BitCoinBIT16 သို့ PayCoinXPY0.103 16BitCoinBIT16 သို့ ProsperCoinPRC0.743 16BitCoinBIT16 သို့ YbCoinYBC0.000003 16BitCoinBIT16 သို့ DarkKushDANK1.9 16BitCoinBIT16 သို့ GiveCoinGIVE12.81 16BitCoinBIT16 သို့ KoboCoinKOBO1.35 16BitCoinBIT16 သို့ DarkTokenDT0.00559 16BitCoinBIT16 သို့ CETUS CoinCETI17.08
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 04:15:02 +0000.